Lehilahy Haindò Maty Novonoina Fa Nihinana Henan’omby · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Oktobra 2015 10:35 GMT
Nametraka fanontaniana hosaintsainina taorian'ny nahafatesan'i Akhlaq i Saurabh Singh izay bilaogera: “Misy olona sahy hamono Haindò mihinana henan'omby ve ao India?”.
Nanamarika ny fifanoherana hafahafa tao amin'ny Twitter i Suchitra Krishnamoorthi amin'ity fihetsika feno fankahalana amin'ny fihinanana henan'omby ity sy ny zava-misy fa i India no mpanondrana izany zavatra izany indrindra manerantany:
Manana tantara lavabe ao India ny fandraràna hena. Tamin'ny volana Aogositra 2015, nasain'ny kaominina ao an-toerana nakatona nandritra ny sivy amby efa-polo andro ireo toerana famonoana omby ao amin'ny faritra roa ao Mumbai, renivohitry ny fanjakana Indiana Maharashtra mba ho afaka hanao fety ara-pivavahana ny Jacy ao an-toerana ao India izay tsy mpihinan-kena.
Nafana ny fanehonkevitra teo amin'ireo mpiserasera media sosialy mpomba sy manohitra izany tamin'ny alalan'ny fampiasana ny diezy #MeatBan (Fandraràna hena) tao amin'ny Twitter. Napetraka nanomboka tamin'ny taona 1964 ny fandraràna vonjimaika isan-taona, saingy nahasarika bebe kokoa izany tamin'ity taona ity noho ny fandraràna ankapobeny mampiady hevitra napetraka tamin'ireo toerana famonoana omby ao Maharashtra tamin'ny Martsa 2015.
Ara-tantara, efa nanomboka tamin'ny taonjato faha-16 ny fandraràna famonoana biby. Nandidy ny vahoaka ny Amperora Mughal Akbar (1542-1605) mba hifady ny famonoana biby sy ny fivarotan-kena ho fanajana ny fihetseham-po ara-pivavahan'ny Jains.
Noravan'ny Offstumped ao amin'ny Niti Foibe ny lalànan'ny henan'omby tao India ary diso ny fandraisan'ireo mpiantsehatra politika samihafa izany ao amin'ny media: